Ny fahotana: ny antony, ny sandany, ny fitsaboana – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 novembre 23, 2012 novembre 29, 2012 Laisser un commentaire sur Ny fahotana: ny antony, ny sandany, ny fitsaboana
“Fa samy alaim-panahy ny olona raha tarihin’ny filany sy fitahiny izy. Ary ny filana rehefa torontoronina, dia miteraka ota; ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana”. (Jakoba 1:14-15)
Ny ota rehetra -ny fitiavan-karena, ny hambom-po, ny tsy fahamarinana, ny fankahalana- dia manaraka fepetra araka ny voalazan’i Jakoba. Ny tsy fahadiovana no fakany, sy ny filan-dratsy. Tahaka izany tamin-dry Adama sy Eva, izay nitondra ota teto amin’izao tontolo izao. Izay voalaza tamin’i Eva dia marina tamin’i Adama koa: “Hitan-dravehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary hazo mahatsiriritra hampahendry dia notazany ny voany ka nihinanany; ary nomeny koa ny vadiny dia nihinana izy” (Genesisy 3:6). Averimberina mandrakariva izany tantara izany rehefa alaim-panahy ireo taranany noho ny fitarihan’ny filany, ka voatarik’izany ary latsaka amin’ny fahotana lalina indrindra.
Saingy tsy mijanona eo akory ny falehany. Ny ota, tahaka ny homamiadana, dia tsy mitsaha-mitombo; mangeja ny olona manontolo izay tratrany izy. Ilay vahiny tany am-boalohany dia lasa kilasimandry maharitra, eny tompon-trano aza avy eo. Ary inona no vokany? Fahafatesana, indraindray fahafatesana ara-nofo, na ratsy kokoa noho izany, fahafatesana ara-panahy izay mitarika ho amin’ny fahafatesana mandrakizay.
Saingy tsy omen’Andriamanitra teny farany ny ota. Manome vaha-olana na fitsaboana Izy-dia ny Mesia, ny tena Zanany, handrava ny herin’ny ota sy Satana. Tsy iza izany fa Jesosy Kristy izay nataon’Andriamanitra ho ota hamonjy antsika (II Korintiana 5:21). Ny rany izay nalatsany teo ambony hazofijaliana dia manadio sy manafaka antsika amin’ny ota rehetra. Amin’ny finoana an’i Jesosy, ilay mpamela heloka, dia ambara ho marina isika eo imason’Andriamanitra ary mahazo ny fampaherezan’ny Fanahy Masina mba hitombo amin’ny fahamasinana.
Publié parfilazantsaramada novembre 23, 2012 novembre 29, 2012 Publié dansUncategorized